टोड्केमा खेलमैदान निर्माण शुरु – धौलागिरी खबर
धौलागिरी खबर	 २०७८ माघ २६, बुधबार १८:०० गते मा प्रकाशित 115 0
टोड्केमा खेलमैदानको जग्गा ब्यवस्थापन गरिदै । तस्बिर धौलागिरी खबर
बेनी । म्याग्दीको पर्यटकीय स्थल टोड्केमा ‘हाइ अल्टिच्युड’ उच्च स्थानको खेलमैदान निर्माण शुरु भएको छ ।
समुन्द्रि सतहदेखि दुई हजार दुई सय मिटरको उचाईमा रहेको टोड्केमा रघुगंगा गाउँपालिकाले खेलमैदान बनाउन लागेको हो । उच्च स्थानको भूगोलमा खेलकुद प्रतियोगिता र प्रशिक्षण सञ्चालन तथा खेल पर्यटनको बिकास गर्ने उद्देश्यले खेलमैदान बनाउन लागिएको रघुगंगा गाउँपालिका–५ का अध्यक्ष मनबहादुर शेरपुञ्जाले बताउनुभयो ।
“गत कात्तिकमा सम्झौता गरेका ठेकेदारले खेलमैदान बनाउन एक्साभेटर परिचालन गरेर जग्गा ब्यवस्थापन थालेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो “थप पुर्बाधार निर्माण शुरु गर्न ताकेता र समन्वय गरेका छौ ।”
ठेक्का मार्फत जग्गा सम्माउने, ग्याबियन पर्खाल निर्माण हुने भएको छ । क्रमागत योजनाको रुपमा आगामी बर्ष थप बजेट बिनियोजन गरेर खेलमैदान निर्माणलाई पुर्णता दिइने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
रघुगङ्गा, मङ्गला, गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकाको सिमानामा अवस्थित टोड्केमा हिमाल हेर्दैं खेलकुद प्रतियोगिता र प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी आधुनिक तथा ब्यवस्थित मैदान निर्माणको कार्य सुरू भएको हो ।
गुराँसको जंगलको बिचमा अवस्थित टोड्केबाट सुर्योदय, धवलागिरी, अन्नपूर्ण रेञ्जका १५ भन्दा बढी हिमाल म्याग्दी, पर्बत र बागलुङको पहाडी भूगोलको मनोरम दृष्य अवलोकन गर्न सकिन्छ । धवलागिरी सेञ्चुरी पदमार्गको प्रवेश बिन्दुमा पर्ने टोड्केमा स्वर्गद्धारी आश्रमको शाखा र शिब मन्दिर पनि भएकाले यसको धार्मिक पर्यटकीय सम्भावना समेत छ ।
स्वर्गद्धारीको शाखा र शिब मन्दिरको जिर्णोद्धार गर्न बिस्तुत परियोजना प्रतिबेदन बनाएर पुरातत्व बिभागमा प्रस्ताब गरिएको रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भबबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो ।
टोड्केमा पूर्बाधार बनाउन रघुगंगा गाउँपालिकाले खेलमैदान सहित चालु आर्थिक बर्षमा रु. एक करोड दुई लाख ८९ हजार ६७७ को लागतमा पदमार्ग, उद्यान र सडक निर्माण शुरु गरेको छ ।
झिँ गाउँदेखि टोड्के जोड्ने सिद्ध फुटस्टेप र पार्क निर्माण योजनाका लागि गत साउनमा बेनीको खुसी होम बिल्डर्स प्रा.लीले भ्याट रकम सहित रु. ५८ लाख दुई हजार ७३२ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । योजनाको कुल लागत अनुमान रु. एक करोड एक लाख गरिएको थियो ।